Ubumba obuhle kunye neentolo: imini, isithoko sobusuku, ividiyo. Ukwenza umtshato kunye neentoloko ngeyinyathelo
Iintolo ziyingxenye yendalo yonke. Bangakwazi ukuba yingxenye yomfanekiso wemihla ngemihla, okanye, kwindawo yokuhlala kunye nomlomo obomvu, wenze i-splash kwiqela. Umlobokazi omnene, udiva othakazelisayo okanye umkhohlisi wokuhlambalaza - bonke aba bafazi njengeentolo. Ukuba ufuna ukufumanisa ukuba zeziphi iindlela zokwenza izinto ezinikezwa ngabaculi abazenzayo abafake imfashini, funda iqaku lethu.
Indlela yokudweba ngokufanelekileyo imicibisholo?
Ubugcisa obuphambili, nto leyo intombazana kufuneka iyenze ngokugqibeleleyo yendalo yokudala iintolo, ukusuka kwincinci, engabonakaliyo, ngokubanzi, ekudaleni igalelo le "iliso lekati".
Ukuze udwebe umcibisholo ococekileyo, kufuneka ukhethe i-padding efanele. Xa uthengi, gxininisa kumbala (qalisa kumthunzi we-eyelashes, iilusi kunye neenwele) kunye nokuthungwa. Ukucacisa iifayile ezicacekileyo, i-liquid, i-gel kunye ne-pods efana ne-cream efanelekileyo, ngokuba "tiki-ayz" - ipensela. Abaqalayo baya kuphathwa ngethambo elibukhali.
Inguqu elula kakhulu yetsolo iyimpiping ephakathi. Umgca usekufutshane ngokusemandleni ukukhula kwee-eyelashes. Iyabonakala ingabonakali. Le ndlela yindlela yokongeza iso lombala kunye nokwakha isiseko sezithunzi.
Ukwenza umgca wucace ngakumbi, ulula ulusu lweenkophelo ngeminwe yakho. Phindela emuva ekhoneni leli li-millimitha ezimbalwa uze uqale utolo. Khumbula ukuba kufuneka kube mncinci. Yiya kwikona yangaphandle kwiso. Yenza i-small thickening phakathi (ngokuphambene nomfundi).
Umsebenzi obunzima kakhulu kukuthatha umsila omhle. Dweba umda wezantsi, uze udwebe phezulu. Kwikona langaphandle liso liye labonakala lincinci elincinci. Yizalise ngombala kwaye utolo lukulungele.
Ikhosi yeklasi ekudaleni i-shooter epheleleyo, ividiyo
Ukuhleka kwelanga elihle ngeentolo
Ukwenyuka kwemvelo kuphelele kumsebenzi eofisini, kunye nomhla wokutyelela. Ukuyidala siya kuyidinga: i-gel-eyeliner emnyama, i-matte shades emhlophe, i-bronze kunye ne-brown hues, i-mascara, i-primer.
Sifake isiseko senqwelo yeelesi ukuze senze i-powder elula.
Sifaka utyani obumnyama bamthunzi amhlophe phezu kwe-primer.
Iphanga lesipuphu esiphezulu sichazwe ngethunzi le-bronze, sithuthula umgca. Qaphela ukuba kwikhoneni liso kufuneka libe lincinci kangangoko kunokwenzeka.
Ngoncedo lwebrashi edibeneyo kunye nezithunzi ezibomvu zitsala utolo, umsila wakhe ulele kwiitempile.
Sizisa ijwabu eliphantsi. Umgca kufuneka uhambe kunye nesithathu yangaphandle kweso.
Ukuze wenze utolo lukhanyise kwaye lucacile, phinda umgca nge gel podvodkoj. Sizama ukwenza ukuba sisondele kwi-eyelashes.
Ukubonakala "uvule" iliso ongayifaka ekhoneni elingaphakathi lezithunzi ezikhanyayo, kwaye udwebe umgca omhlophe kwi-mucosa iso.
Le makeup yinto enhle kumantombazana enamahloni anamabala. Abanikazi bezityalo eziluhlaza, kunye nemehlo eluhlaza okwesibhakabhaka kufuneka bakhethe udidi lwe-beige-purple.
Iifowuni kunye neentolo kunye nemilomo ebomvu
Ukwenziwa kwe-Classic yase-Hollywood kunye neentolo kunye nemilomo ebomvu ikhangeleka kakhulu. Khumbula kuphela uMarilyn Monroe okanye uDita von Teese. Unokwenza ukuzenzela okufanayo ekhaya. Ukwenza oku, lungiselela isiseko, ukufihla, i-highlighter kunye nezinye iindlela zokwenza umfanekiso, i-gel podvodku emnyama, ipencileni emhlophe, i-pallet yamehlo emhlophe, emdaka okanye e-plum shades, izithunzi kunye nokulungisa i-gel, kunye ne-eyelashes.
Okokuqala, yenza ibala. Musa ukulibala ngokutyhila kunye nokugqithisa ngokubonakala kwintsholongwane nangokwemvelo.
Kwi-ilepidi yeselula, sebenzisa isiseko, kwaye ke izithunzi ezimhlophe.
Ikhoneni langaphandle kunye nefolda zigqatswa ngombala obomvu okanye we-lilac. Kakhulu.
Ngepensile emhlophe, gcina iliso elimnyama (kwiseli yezantsi).
Dweba utolo. Kufuneka kube mhlophe kwaye imboniso, ungesabi ukwenza ixesha elide.
Dweba ijwabu lezantsi.
Paint i-eyelashes yakho. Ukufezekisa ukujongwa kweso, iindawo ezininzi zokufakelwa zingafakwa kwikona langaphandle.
Faka isicelo emlonyeni i-lipstick ebomvu okanye emhlophe.
Yenza kwindlela yokupakisha, ividiyo
Ukuhlwa ngokuhlwa kunye neentolo
Ukuya kwiphathi, unokwenza i-makeup yakho kunye neentolo kunye ne-lipstick eqaqambileyo namhlanje. Sasisebenzisa ipallet ephukile, ipensela emdaka, ipensile ye-gel, kunye ne-lipstick ebomvu ebomvu nebomvu.
Isinyathelo sokuqala kukudala ithoni epheleleyo. Khumbula ukuba i-lipstick ebomvu ingagxininisa zonke izibhobho, ubomvu okanye ukuphosa ebusweni. Faka isicelo sesiseko seetoni, kwaye isiseko. Ukungapheliyo kucocekile kunye nokucasha. Musa ukulibala ukuguqula imijikelezo phantsi kwamehlo akho. Ngokuncedwa kwe-highlighter, khetha isikhulu sebunzi kunye ne-chin, phawula umlenze ngaphezu komlomo ophezulu uze udwebe umgca ochanekileyo ngasemva kwempumlo. Yenza umnyama ubonakale emacaleni empumlo, gxi ninisa i-cheekbones.
Sisebenzisa i-primer kwiinkophe kwaye sichaza i-crease ngezithunzi zobhedu.
Ngoxa uncedo lwebrashi elincinci kunye neendwangu ezimnyama, yakha umcibisholo kwikona yangaphandle kwiso.
Sifaka i-crease kunye ne-angle ngokuncedisa izithunzi ezimnyama.
Siyipenda ikhefu leselula ngegolide.
Siletha ikhefu eliphantsi, phinda umgca ngemithunzi.
Sifaka umama-we-pearl omncinane ekungxenyeni yangaphakathi kwiso.
Sijikeleza imilomo yethu kumgca we-pencil ngepencil ekhanyayo.
Ukusebenzisa i-brush, gcwalisa indawo yangaphakathi nge-lipstick, ukuyibeka kwinqanaba.
Ukwenza umtshato ngeentolo
Ukwenza umtshakazi kufuneka kube lula kunye nomsondelana, kodwa ngexesha elifanayo liqaqambile kwaye likhangele. Ukugxininisa amehlo, iintolo kunye nebala lodidi lwegolide-olupinki lugqibeleleyo. Musa ukulibala malunga neefowuni zobuxoki.
Emva kokusebenzisa i-primer, sikwahlula ikona elingaphakathi kunye nekhulu lekhulu ngeemigodi zegolide.
Emva koko faka ithoni ebomvu ekhoneni elingaphandle. Dweba i V.
Sithatha izithunzi zibe ngxoweni yekhulu.
Siletha ijwabu eliphantsi kwinqanaba elisezantsi.
Dweba utolo. Sigxininisa kwikona yangaphandle, ngoko ke siqala umgca endaweni ethile ukusuka phakathi kwekhulu, ngokunyanisekileyo ukulukhupha.
Mthunzi umthunzi ophantsi ngezithunzi ezimnyama.
Siya kubalalisa i-eyelashes okanye sibambe iqela lezinto ezibonakalayo kwaye umfanekiso wethu ulungele. Yongezelele ngepinki ephothiweyo okanye emthunzini we-lipstick kunye neentlobo zemvelo.
Ukuchaneka njani ukusebenzisa i-concealer?
Izindlela ezifanelekileyo zokuhlukana ngesondo ngomlomo
Indlela yokuphucula imeko yeenwele kwiintsuku ezili-10?
Iingoma kunye neentlupheko ezinxulumene ne-cellulite
Ngaba ndifanele nditshatile umhlolokazi?
Izindlela ezingapheliyo zonyango. Into ethile malunga ne-hypnosis, yoga kunye nezinye ...
Ukudlulela kwixesha elidlulileyo: ukwakheka kwe-matte kubuya kwifashini
Izifo zezingane ze-penis kumakhwenkwe
I-fat in marinade ye-anyanisi